सम्झना घिमिरे काठमाडौं, २० असार
नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो, शिशिर योगी । बुढापाकादेखि युवा र बच्चासम्मको मनमस्तिष्कमा आफ्ना स्वर गुञ्जाउन सफल छन् योगी । साधारण जीवन जिउने योगी सफल गायकका रूपमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चिनिन्छन् ।
प्रशंसाका गतिला पात्र बनेका योगीले यस स्थानसम्म आइपुग्न धेरै दुःखका पहाडहरू झेल्नुप¥यो । दाङ जिल्लाको देउखुरीमा जन्मिएका योगी दुःखलाई जीवनको परीक्षा मान्दै हरेक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न लागिपर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् । योगी निर्भीक, स्वतन्त्र बाँच्न रुचाउने व्यक्ति हुन् ।
उमेरले ५० मात्र टेकेका योगीका गीत सुन्दा जो कोही मन्त्रमुग्ध भएर झुम्न सक्छन् । अक्सर उनका प्रशंसकहरू योगीको स्वरमा जादू छ भन्ने गर्छन् ।
प्रायः सुखी र सफल देखिने योगी सफलता पाउनका लागि भोग्नुपरेका कष्ट आफ्नो सफलताको पहिलो सिँढी भएको बताउँछन् ।
परिवारको साथ थिएन, मलाई मलतब पनि थिएन
योगी सानैदेखि स्वतन्त्र र निर्भीक स्वभावका थिए । उनी उमेर सानो भए पनि आफ्नो निणर्यप्रति कटिबद्ध भएर लागिपर्थे । जब ७ कक्षामा पढ्ने भए योगी, उनी त्यस समयदेखि नै आफ्ना लागि चाहिने सामान आफैँ किन्न तम्सिन्थे ।
सामान्य बालबालिका आमाबुबाको निर्देशनलाई शिरोपर गर्दै आमाबुबासँग यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेर लड्थे भने योगी भने आफूलाई चाहिने सामान किन्न विद्यालय सकेर खोलाखोला कुद्ने गर्थे ।
‘म आफैँ आफ्ना कापी–कलम, लुगाफाटोको जोरजाममा लागिपर्थें । नगर भन्नुहुन्थ्यो आमाबुबाले तर मैले टेरे पो ! पटक्कै टेर्दिनँथेँ । मान्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैनथ्यो’, बाल्यकाल सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘आफैँ खोलाखोला गएर चौधरी साथीहरूसँग माछा मार्थे, डुंगा चलाउँथे, बजारमा लगेर मारेको माछा बेच्थे र त्यही पैसाले आफूलाई चाहिने किताब–कलम, खान मन लागेको कुरा र लुगाफाटो किन्थेँ ।’
नटेर्ने उनको यो प्रवृतिप्रति बाबुआमाले वाक्कदिक्क हुँदै सम्झाउँदा पनि नमानेपछि भने अलिक अराजक पो हो कि भन्ने ठान्थे । ‘तर, पनि म कहाँ सुन्ने मान्छे हो र ! अराजकै सही, आफूलाई मन लागेको कुरा गरेरै छाड्छु । सुन्नुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन ।’
स्वतन्त्र, निर्भीक आफ्ना कुरामा कटिबद्ध रहने स्वभावका योगी सानैदेखि बुबाले ल्याएको पुरानो रेडियोको कान बाटारीबटारी रेडियो नेपाल सुन्थे । समाचारमा फिटिक्कै मन नजाने भए पनि गीत सुन्नकै लागी एक घण्टाको सामाचार पनि सुनिदिन्थे उनी ।
चौधरी, थारू साथी टन्नै थिए उनका । उनीहरू सबैलाई गीतमा लठ्ठ बनाइदिन्थे अनि दाउरा लिन जंगल जाँदा भारी बनाउन लगाउँथे । यसरी उनले गाएको गीत सुन्नकै लागि साथीहरू माछा मार्न खोलादेखि दाउरा बोक्न जंगलसम्म सहयोग गर्न आइपुग्थे ।
यसरी बच्चादेखि नै कसैलाई नटेर्ने उनी उग्र मात्र बनेनन्, आफूलाई परिवार, नातागोता, इष्टमित्र सबैबाट टाढा राखे । उनलाई सम्बन्धका जालयुक्त बन्धनहरू तोड्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । सानैदेखि उनी यी बन्धन तोड्दै अगाडि बढे ।
समय समयमा विभिन्न कार्यक्रममा अफर आउँदा ‘नजा’ भन्दा पनि भागीभागी जान्थे । ‘भागेर जाँदा पनि अहँ कहिले डर लागेन’, उनले भने, ‘सायद त्यसैले होला एसएलसीको परीक्षा दिनेवित्तिकै उनी काठमाडौं हान्निएँ, परिवारलाई थाहै नदिई ।’
सङ्गीतका कारण परिवार, साथीसङ्गी सबै छाडेँ
सानैदेखि सङ्गीतमा लगाव राख्ने योगी सङ्गीतकै योग गर्दा गर्दा साँच्चैका योगी बनेका छन् । सङ्गीतकै लागि साथीसङ्गी, परिवार कसैको वास्ता गरेनन् उनले । उनी साङ्गीतिक क्षेत्रमा पागल पाराले लागेको बताउँछन् ।
‘त्यही पागलपनले परिवार टाढा बनायो, साथीसङ्गी टाढा बनायो’, उनी भन्छन्, ‘सोच्छु, दुःख लाग्छ तर पनि आफैँभित्र एक प्रकारको सन्तुष्टि पाउँछु, जुन मेरै पागलपनको नतिजा हो ।’
सम्बन्धको जालमा बाँधिएर हुने खुसीभन्दा सम्बन्ध नै तोडेर स्वतन्त्र हुँदै गाली खाँदै पाएको सन्तुष्टि नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं भागेर आएका उनी २ छाक खाँदै जीवन चलाउन सडक विभागको सुपरभाइजर भएर काम गरे । साङ्गीतिक क्षेत्रका ‘पागल’लाई सुपरभाइजरमा के चित्त बुझ्थ्यो र ! उनी जागिर छाडेर एउटा निजी विद्यालयमा सङ्गीत सिकाउन थाले । यहीँबाट सुरु भयो उनको साङ्गीतिक यात्रा ।
सुपरिचित गायक तथा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङबाट सङ्गीतको प्रशिक्षण लिएका योगी आफ्नो पहिलो एल्बमबाट नै उचाइमा पुगे ।
नटेर्ने बानीले धेरै रिसाए, मचाहिँ सन्तुष्ट छु
‘म सानैदेखि नटेर्ने स्वभावको थिएँ । म यसैमा खुसी छु । यसरी भनिरहँदा सबैको मनमा लाग्न सक्दो हो, कस्तो दम्भी मान्छे भनेर । तर, त्यसो होइन, आफूलाई लागेको काम गर्नु दम्भी हुनु होइन’, उनले भने, ‘कसैलाई मेरो यो बानीले असर गर्दैन । होला, यो गलत बानी तर यो नै मेरो सफलताको पहिलो कडी हो ।’
उनि कुनै पनि कदम चाल्दा धेरै समय अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने हुँदा आफ्नो निर्णयप्रति पूर्ण प्रविबद्ध रहने बताउँछन् ।
योगीको नटेर्ने र मनमोजी स्वभावलाई लिएर जसले जति टिप्पणी गरे पनि आफू भने सन्तुष्ट भएको बताउँछन् ।
योगीले ६ वटा एल्बम निकालिसकेका छन् । उनको पहिलो एल्बम ‘पहिचान’ हो । उनलाई ‘पहिचान’ एल्बमले नैै उचाइमा पु¥यायो । यससँगै उनका ‘सुस्केरा’, ‘आकर्षण’, ‘मोडमोडमा’, ‘छहराको ढोल’ र ‘शिशिर’ गरी ६ वटा एल्बम बजारमा आइसकेका छन् ।
सबै एल्बमका प्रायः गीतहरू लोकप्रिय र चर्चित छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, २० असार २०७७, ०१:३२:००